I-EURCAD ibuyisa iXesha elidlulileyo le-1.5400 phakathi kweNtengiso esecaleni, i-CAD ibuthathaka
Ukuhlaziywa: 10 Februwari 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCAD-ngoFebruwari 10
I-EURCAD ibikukuhamba okungxamisekileyo okuphezulu emva kokuhla kwinqanaba elidlulileyo le-1.5400 kusuku olungaphambili kwaye ngoku kwiseshoni yangoku. Imali eqhelekileyo yaseYurophu inyuke ngeepips ezingama-24 okanye i-0.15% ngokuchasene neDola yaseCanada ukusukela ngala mhla waqalisa phakathi emarikeni ecaleni.
Amanqanaba okumelana: 1.5550, 1.5500, 1.5422
Amanqanaba enkxaso: 1.5313, 1.5268, 1.5200
I-EURCAD yexesha elide iTrend: Ukuma
Ikhefu eliqinileyo le-EURCAD le-1.5400 yenqaku elijikelezayo licebisa kwaye liqinisekisa ukuphinda kuqalise konke ukubuyela umva ukusuka kwimimandla ephantsi yethutyana eyi-1.5313. Abarhwebi kufuneka bajonge ngokubonakalayo imiqondiso yeebhotile phakathi kwe-1.5268 kunye ne-1.5313 yokuqulatha ukungcola kutsha nje kunye nokuqhubela phambili ukubuyela kwakhona. Kodwa ikhefu lokuthatha isigqibo liya kuvula ukuwa kwexesha eliphakathi ukuya kwimimandla eyi-1.5200.
Ngeli xesha, sinokulindela ilahleko yomxhesho ongezantsi njengoko izama ukuphikisa ukuxhathisa kwinqanaba le-1.5422. Kwicala elingaphezulu, nangona kunjalo, ikhefu le-1.5500 yenqanaba lokumelana liyafuneka ukuqinisekisa ukugqitywa kokuwa. Ngaphandle koko, umbono uya kuhlala uhleli. I-EURCAD yeXesha elifutshane leNdlela: Ukulinganisa
Uhlalutyo lobuchwephesha kwitshathi yeeyure ezi-4 icebisa ukuba abathengisi mabalinde isiqinisekiso esingakumbi sokuba amaxabiso azokuma ngokujonga ubungakanani obulandelayo obusezantsi / obusezantsi bokurhweba ecaleni okuqhubekayo ngaphezulu kwenqanaba le-1.5313.
Ngokumalunga nokukhetha okwangoku, imeko yexesha elikufutshane inokuhlala kuluhlu logama inqanaba lokumelana ne-1.5422 liphethe. Yiyo loo nto, singakhangela uphawu lokurhola apho. Okwangoku, kwicala eliphantsi, ikhefu le-1.5313 yamanqanaba amancinci enkxaso ayimfuneko ukubonisa ukugqitywa kwesaphulelo. Ngaphandle koko, ukunyuka okuthe kratya kuya kuhlala kufanelekile kwimeko yokubuyela umva.
tags EURCAD, Uhlalutyo Technical
Iziliphu ze-EURCAD phantsi kweNqanaba le-1.5400 njengoko uLoonie ahlala eQinisekile kwiXabiso leXabiso leoyile
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCAD-ngoFebruwari 3
Ikhefu elisezantsi le-EURCAD le-1.5422 yenqanaba ngabathengisi ngoku liqinisekisa ukuqala kwakhona kokuhla konke ukusuka kwi-1.5979 ukuya kwinqanaba le-1.5300. Isibini se-EURCAD yayityibilika ngaphantsi I-1.5400 kwangoko ngexesha leseshoni yaseYurophu njengoko uLoonie ehlala eqinile kunyuko lwamaxabiso eoyile. Nangona kunjalo, umqhubi ophambili onyukayo we-loonie kukuphuculwa kwe-BOC koqikelelo lokukhula kwayo.
Amanqanaba okumelana: 1.5600, 1.5500, 1.5422
Isibini semali siwele ngaphantsi kwe-1.5400 yamanqaku ukuya kumda osezantsi wepateni eyehlayo kwinqanaba le-1.5364 ngexesha leseshoni zaseYurophu. Izalathi zobuchwephesha zixhasa ukungathandabuzeki kwe-RSI ebambe ezantsi kwimigca yayo. Ukuba amaxabiso ayancipha enye inkxaso inokufumaneka kwindawo ejikelezayo yenkxaso ye-1.5313.
Kwixesha elide, kuphela ukubuyela umva ngezantsi kwenkxaso yokwenyuka komjikelo kunokutshintsha imbonakalo iye kwinto engentle phantsi kommandla wenkxaso. Ukuya phezulu, ukuba isibini siyakwazi ukuphinda siphumelele kwaye soyise inqanaba lokumelana ne-1.5422, inqanaba elilandelayo eliza kujongwa liya kuba kwinqanaba le-1.5500 kunye ne-1.5593 ejikelezayo kwinqanaba eliphezulu likaJan 28.
I-EURCAD yeXesha elifutshane leNdlela: Thwala
Kwixesha elifutshane, umbono uhlala ungalunganga kuba amaxabiso abambe ngaphantsi kwamanqaku ayi-1.5400 kunye nomndilili ohambayo 5. Nangona kunjalo, abathengisi be-bearish banokujolisa kwiqela lokuxhasa kwinqanaba le-1.5313. Ixabiso lokutshintsha kwemali linokwenza isaphulelo esifutshane kumfanekiso ojikelezayo wenqanaba kwinqanaba le-1.5400 kwikota elifutshane.
Ukuba iphethini yokunyuka kwezinto ibambe, abathengisi be-bullish banokuqhubeka nokucinezela amaxabiso aphezulu kwezi seshoni zilandelayo zorhwebo. Ngokuchasene noku, ukulahleka kwenkxaso kwii-1.5313 lows kungavula indlela yokubuyela nzulu kwindawo eyi-1.5268.
I-EURCAD ebaleke yokubaleka ihlala phantsi kwe-1.5500 kodwa igcina umbono oqinisekileyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURCAD-nge-27 kaJanuwari
Imali enye yaseYurophu ijikeleze nge-0.05% ngokuchasene neDola yaseCanada ukusukela ekuqaleni kweseshoni yangoLwesithathu. Inkqubo ye- Isibini semali sihlala sisezantsi ukusuka kwixabiso le-intraday ye-1.5472 ngokuqhubeka kokuhlala unyanzelekile phantsi kwe-1.5500. Ngokunikwa kwinqanaba lotshintshiselwano lwakutsha nje ukusuka kumgangatho ophantsi, isibini sigcina umbono waso wethemba.
Amanqanaba okumelana: 1.5785, 1.5675, 1.5550
Amanqanaba enkxaso: 1.5402, 1.5313, 1.5268
Njengoko kubonisiwe kwitshathi yemihla ngemihla kwimeko engeyiyo, inkxaso yangoku kwangoko inokubamba kwinqanaba elithe tyaba kwi-1.5402 phantsi kolungelelwaniso lomndilili ohambahambayo 5 kunye ne-13 kumanqaku ayi-1.5420. Ukutyibilika phantsi kwesi siseko sibalulekileyo se-1.5402, ukuxhasa ngakumbi iziseko zihlala kumgangatho onyukayo kunye nokuhla kwamanqanaba akutshanje kwinqanaba le-1.5268 kunokuba ngumceli mngeni wokuntywila.
Ukutyhala okuphezulu kunokuvavanya kwakhona inqanaba le-1.5550 kunye ne-spike yokunyukela phezulu ukuya kumngeni wokuphakama konyaka kwizikhephe ze-1.5680. Isishwankathelo, amanqanaba akufutshane nemida kuya kufuneka ukuba aphulwe ukukhawulezisa ixabiso kwicala elinxulumene noko.
I-Intraday bias kwi-EURCAD ihlala ibuthathaka kwicala elisezantsi kwaye ukudityaniswa phantsi kwenqanaba le-1.5500 kunokonyusa ngakumbi. Kwicala elingaphezulu, ikhefu elizinzileyo lenqanaba lokumelana ne-1.5550 liya kuphakamisa ukuba ubuncinci kulungiso lokuwa ukusuka ku-1.5785 Dec .22, 2020 kwinqanaba eliphezulu.
Olunye unyuko kufuneka lubonwe ekubuyiselweni ngokutsha kwe-1.5785 ukuya kwi-1.5550 kwinqanaba le-1.5970. Nangona kunjalo, ukwaliwa ngenqanaba le-1.5785 kuyakugcina kufutshane nokuqina kwexesha elinye ukuwa kwinqanaba le-1.5550 kamva kwiiseshoni ezilandelayo eziza kungekudala.
I-EURCAD ibuyela umva kwisiseko sangaphambili
Ukuseta i-rally elula kakhulu kwi-EURCAD.
Ixabiso lilalile inqanaba eliphambili okanye akukho ndawo yorhwebo. Ukuba amaxabiso aphule izantsi (ezantsi kwendawo engekho urhwebo) kuya kufuneka sifutshane ukufumana umva kwakhona kwesakhiwo.